နိုဝင်ဘာလ 29, 2011 တွင် 7:18 နံနက်
တိုတောင်းသော code များခေါ်ဆိုမှုကို transposh widget ကအလုပ်လုပ်ခြင်းနှင့် fatal error ဖြစ်ပေါ်စေသည်ပါဘူး –
– fatal error: သေချာမသိတော့နည်းလမ်း transposh_plugin_widget မှ Call:: transposh_widget () လိုင်းပေါ်တွင် 407
ငါသည်ဤကိုဘယ်လို fix ပါဘူး? မြေတပြင်လုံး site ကိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီအမှားရဲ့ update ကိုအပြီးအလုပ်မလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်🙁
နိုဝင်ဘာလ 29, 2011 တွင် 7:42 နံနက်
ဟုတ်ကဲ့, တစ်ဦး bug ကို – ထိုနေရာတွင်အစားထိုးရန်ကျေးဇူးပြုပြီး 407 နှင့်အညီ:
ဒါ့အပြင်အခုသင်အတွင်းပိုင်း plugin ကို၏အသွင်ပြင်ကို defining တစ်ဦး param စေလွှတ်မည်နိုင်တယ်ဆိုတာသိမှရကျိုးနပ်ပါလိမ့်မယ် $instance variable ကို
နိုဝင်ဘာလ 29, 2011 တွင် 10:10 နံနက်
ကျေးဇူးတင်ပါသည်! ဟုတ်ကဲ့ဒီ debug code ဖြစ်ပါတယ်! ယခုမူကား listbox ပြသထားတယ်ငါအလံပြချင်. အလံပြသနေကြောင်းဒါကြောင့်ဒုစရိုက်ကိုပြုနည်း.
နိုဝင်ဘာလ 29, 2011 တွင် 12:15 ညနေ
နိုဝင်ဘာလ 29, 2011 တွင် 12:39 ညနေ
နိုဝင်ဘာလ 29, 2011 တွင် 12:45 ညနေ
hi ငါတူညီတဲ့ပြဿနာရှိခြင်းင်. ငါသည်အဘယ်မှာနေရာချထားပါဘူး 407 လိုင်းဒါကြောင့်လဲကျနော်အပေါ်က debug code တွေနဲ့ကကျေးဇူးပြုပြီးအစားထိုးနိုင်တယ်? ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
နိုဝင်ဘာလ 29, 2011 တွင် 8:45 ညနေ
၎င်း၏ plugin ကို၏ wp ကို directory ထဲတွင် transposh_widget.php အတွက်, သင်စီမံခန့်ခွဲမသွားနိုင်မယ်ဆိုရင်, ကျွန်တော်တို့ကိုဒီ site ပေါ်တွင်ဖွဲ့စည်းငါတို့သည်သင်တို့တစ်ဦးပုံသေဗားရှင်းပို့ပေးပါမည်အဆက်အသွယ်ကိုအသုံးပြုနိုင်သည်
နိုဝင်ဘာလ 29, 2011 တွင် 1:06 ညနေ
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့် CSS ကို load ကိုဘယ်လို?
ငါသည်အ transposh_widget ကိုသုံး(အခင်းအကျင်း(), အခင်းအကျင်း('' ခေါင်းစဉ်’ => '' ဘာသာပြန်စာပေ '', '' widget_file’ => 'Flags / tpw_flags.php' '));
အလံအခု, သို့သော်, tpw_flags.css load မပါဘူး.
နိုဝင်ဘာလ 29, 2011 တွင် 11:43 ညနေ
ဒီကိုင်တွယ်ရန်နည်းလမ်းနှစ်ခုရှိပါတယ်, တစုံတယောက်ကိုငါပြုပြင်ဖို့တချို့လမ်းတွေကိုစဉ်းစားရမှာဖြစ်ပါတယ် (clueless) နှင့်အခြားကိုသင် css တို့အပြင်အတင်းတံ့သောပြသနေပုံကြသည်မဟုတ် sidebar တစ်ခုမှ widget က add ဖို့ဖြစ်ပါတယ်.
ယခု css ကိုထည့်သွင်းသည်ကို ထောက်. ဒီ code ကိုအမှန်အတော်လေးလှည်ခဲ့ (နှင့်ခန္ဓာ) အားလုံးတက်ကြွစွာရှိဝစ်ဂျက်များအတွက်, နှင့် sidebars တလျောက်သောစာမျက်နှာပေါ်တွင်ဖော်ပြလိမ့်မည်သည့်သေချာသိရဖို့လမ်းမရှိ, ဒါကြောင့်တက်ကြွစွာရှိဝစ်ဂျက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားနေကြတယ်.
တစ်ခုကအခြားရွေးချယ်စရာလမ်းစာမျက်နှာ၏သေဒဏ်စီရင်တွင်အမှန်တကယ်မှန်ကန်သောအရပ်ဌာန၌မှန်ကန်သော css တို့အပြင်အတင်းအားဖြစ်လိမ့်မည်, အရာတခုတခုအပေါ်မှာအရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်းထည့်သွင်းအဓိပ္ပာယ်ရသည် wp_print_scripts ၎င်းအတွက် widget ကလူတန်းစားကွပ်မျက် add_transposh_widget_css … ငါသည်ဤအလွန်အကျွံအလုပ်ဖြစ်လိမ့်မည်ထင်, ဒါကြောင့် hackerish လမ်းနှင့်အတူလိုက်ထိုကဲ့သို့သောမကောင်းတဲ့စိတ်ကူးမဟုတ်ပါဘူး.
နိုဝင်ဘာလ 29, 2011 တွင် 9:55 နံနက်
API ကိုအဓိကရှာဖွေရန်ရှိရာအရပ်၌သင်တို့ plugin ကိုထည့်သွင်းရန်ရှင်းလင်းရန်နိုင်သလား?
နိုဝင်ဘာလ 29, 2011 တွင် 12:08 ညနေ
ပဌမ, ငါသည်သင်တို့ကိုလက်ရှိတွင်မဆို keys တွေမလိုအပ်ပါဘူး, အရာအားလုံးကိုအလုပ်လုပ်မည်ကိုရှင်းလင်းလိမ့်မယ်.
ငါသည်အ keys တွေကိုရှာဖွေဖို့ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာ၎င်းတို့ကိုရှာဖွေဖို့ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ကိုအသုံးပြုဖြစ်သည်ကိုသင်တို့အားပြောပြနိုင်, ကိုယ့်ကိုရှာပါ “X ကို API ကို Key ကို translate” X ကိုသင်အကြိုက်ဆုံးတစ်ဦး၏နာမကိုအဘယ်မှာရှိသနည်း,
1. သူတို့ကအစဉ်မပြတ်သူတို့ရဲ့ urls ပြောင်းလဲရန်, နှင့်ဘယ်သူ့ကိုမှမွမ်းမံရန်နှောင့်အယှက်မ, ဒါကြောင့်လဲကျနော်အနာဂတ်စာဖတ်သူတွေလှည့်ဖြားချင်ကြပါဘူး
2. ငါသည်ထိုသူတို့ကိုကိုရည်ညွှန်းများအတွက်ပေးဆောင်လာဆောင်မှာမဟုတ်ဘူး, မသင်တို့ကိုကျင့်သောလိုအပ်နေပါသည်ကျနော်ထင်ပါလဲ
နိုဝင်ဘာလ 29, 2011 တွင် 4:51 ညနေ
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ, ငါသည်ခပ်သိမ်းသောဘာသာစကားများစဉ်းစားမည်သူတစ်ဦး Sitemap ကိုဖန်တီးရန်ပြဿနာတစ်ခုရှိသည်. သင်သည်ဤပြဿနာအတွက်အဖြေတစ်ခုရှိသည် Do?
နိုဝင်ဘာလ 29, 2011 တွင် 8:46 ညနေ
Google က XML ကို Sitemap plugin ကိုရရှိနိုင်ဘို့တစ် patch ကိုရှိပါတယ်, စ – version4က Plugin ကို၏ beta ကိုအဘယ်သူမျှမ patch ကိုလိုအပ်ပါတယ်. သင်တို့သည်ငါတို့၏ trac site ပေါ်တွင် patch ကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်
နိုဝင်ဘာလ 29, 2011 တွင် 11:10 ညနေ
ဒါကြောင့်ပိုကောင်းသစ်စောင့်ဆိုင်းရန် 0.81 ဗားရှင်း ? ကျွန်တော်တို့ကို manually patch ချင်ကြပါဘူးဆိုရင် ?
နိုဝင်ဘာလ 29, 2011 တွင် 11:25 ညနေ
ငါအသစ်များ bug တွေကြောင့်ဖြစ်လိမ့်မည်ကတိပေး 0.8.1 😉ပေမယ်အလေးအနက်ထား, သင်သည်ငါ့ကိုစာရေးဆက်သွယ်နိုင်သည်သင်တို့ကိုငါနေတဲ့ Patch version ကိုပို့ပေးပါမည်, ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ကိုယ်ကို patch. လည်း – အသုံးပြုသူအများစုဒီ feature ကို အသုံးပြု. ကြသည်မဟုတ်, အရာကိုလည်း sidebar မှာရှိတဲ့တစ်ဦး widget ကမိတ္တူအားမရအားဖြင့်အစားအတိုက်ရိုက် widget က code ကိုထည့်သွင်း၏နေရာတွင်အစားထိုးရနိုင်, sidebar မှာရှိတဲ့ကိုထည့်သွင်းပြီး…
နိုဝင်ဘာလ 30, 2011 တွင် 1:41 နံနက်
မင်္ဂလာပါ, သင့်ရဲ့အံ့သြဖွယ် plugin ကိုတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်စကားပထမဦးဆုံး. ဒုတိယ, နောက်ဆုံး update ကိုပြီးနောက်ငါသည်ငါ၏ဘာသာပြန်ချက်တည်းဖြတ်ဖို့မလုပ်နိုင်ဘူး. ငါပြင်ဆင်ရန်ခလုတ်ကို mode ကိုဘာသာပြန်ဆိုအတွက် page ကိုပြောင်းလဲမှု clich သော်လည်းငါ modify ဆို Popup window ကိုမရကြသည့်အခါ. ကျွန်တော့်ကိုကူညီပေးလို့ရမလား?
နိုဝင်ဘာလ 30, 2011 တွင် 7:01 ညနေ
အဆက်အသွယ်ကိုပုံစံကိုအသုံးပြုကြပြီးကျွန်တော်ဒီကိုပြုပြင်တာတွေအပေါ်သင်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ် ကျေးဇူးပြု., အခြားသော plugins နှင့်အတူဖြစ်ကောင်းအသစ်တစ်ခုပဋိပက္ခ
နိုဝင်ဘာလ 30, 2011 တွင် 9:44 ညနေ
Ezio, အဲဒါပြီးတဲ့နောက်ပေါ်လာတဲ့ window ကိုယခုစတိုင်မရှိဘဲသင်၏စာမျက်နှာရဲ့အဆုံးမှာပြသနေပုံဖြစ်ပါတယ်လျှင်သင်စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်?
နိုဝင်ဘာလ 30, 2011 တွင် 7:53 နံနက်
ဟိုင်း. ငါ bug ကိုတည့်မတ်ပေမယ့်ငါပြန်အလံမှဆွဲချမပြောင်းနိုင်ပါ. ငါ widget.php ၏အောက်ဆုံးတစ်ခုသို့မဟုတ်ကွဲပြားခြားနားဖိုင်အပေါ်က code တွေကို add လုပ်ပါ?
နိုဝင်ဘာလ 30, 2011 တွင် 7:00 ညနေ
သင်က widget ကခေါ် code ကိုပြောင်းပေးဖို့လိုတယ်, အထက်ရှင်းပြခဲ့သည်ခဲ့သည်
နိုဝင်ဘာလ 30, 2011 တွင် 9:59 နံနက်
မင်္ဂလာပါ, ကိုယ့်ဗားရှင်းအသစ်ကို install လုပ်ပြီးသား 0.8.0, ဒါပေမယ့်ယခုအဘယ်အရာကိုမျှအလုပ်မလုပ်ပါဘူး… ပြုပါ? ကျေးဇူးတင်ပါသည်!
နိုဝင်ဘာလ 30, 2011 တွင် 7:02 ညနေ
ကျွန်တော်တို့ကိုတိုက်ရိုက်မဆက်သွယ်ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့က fix ဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ် ကျေးဇူးပြု.
ဒီဇင်ဘာလ 5, 2011 တွင် 12:54 ညနေ
အသင်းကိုရရှိမှုကျေးဇူးတင်ပါတယ်: ငါ JQuery canbiando ပြဿနာနှင့်🙂ချိတ်ဆက်သော script ကိုဖြေရှင်း
ဒေဗောရ Gamble ကပြောပါတယ်
နိုဝင်ဘာလ 30, 2011 တွင် 4:07 ညနေ
Transposh version တွင်စနစ်တကျပြသပေးမထားဘူး 0.8.0 တစ်ပြင်ဆင်ချက်ရှိပါသလား?
နိုဝင်ဘာလ 30, 2011 တွင် 7:05 ညနေ
ဟယ်လို, တစ်ဦး CSS ကိုပြဿနာနှင့်တူပုံရတယ်, တစ်ပြင်ဆင်ချက်အပေါ်လုပ်ကိုင်ဖို့ကိုတိုက်ရိုက်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်
Glenn Newland ကပြောပါတယ်
နိုဝင်ဘာလ 30, 2011 တွင် 5:44 ညနေ
ငါသည်သင်တို့ကိုသစ်ကိုလွှတ်ပေးရန်သို့သွင်းထားပြီအလုပ်ရှိသမျှကိုအဘို့ကြီးသောဖြစ်ကြောင်းကို, ကို Google API ကိုအကျပ်အတည်းပထမဦးဆုံးမှာနှင့်အတူကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခဲ့ကြအံ့နည်းကြိုးစားပမ်းစားထည့်သွင်းစဉ်းစား. ကောင်းစွာပြီးဆုံးသည်!
အဘယ်သို့ငါမသိချင်ဘူးဖြစ်ကြောင်းကိုအဘယ်သို့ငါငါ့ site ကိုနိုင်ငံတကာရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များတွင်စာရင်းလျက်ရှိသည်သေချာနိုင်ပါတယ်ဖြစ်ပါသည်, မျိုးစုံဘာသာစကားတွင်? ကျွန်တော်ဆိုလိုသည်မှာ, ငါ့ site ကို transposh မှကျေးဇူးတင်စကားယခုတွင်ဖတ်ရှုဖြစ်ပါသည်3ဘာသာစကားများ, ဒါပေမယ့်တူညီတဲ့လျှင်အဖြစ်ခြင်းဖြစ်သည် “အိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပသည့်” thoe ဘာသာစကားများသို့မဟုတ်ငါတစ်ခုခုလုပ်ဖို့လိုအပ်သလဲ (စာမျက်နှာတစ်ခုချင်းစီသိုလှောင်တူဒါမှမဟုတ် multisite ဖန်တီး?)
အသစ်ထုတ်များအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်, နှင့် API ပြင်ဆင်ချက်.
နိုဝင်ဘာလ 30, 2011 တွင် 7:08 ညနေ
သင်သည်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်သင့်ဆိုဒ်များကြည့်ရှုခွင့်ပြုလိမ့်မည်မဟုတ်ပေမူသောသင်တို့အ site ပေါ်တွင်ပြဿနာတစ်ခုရှိသည်, ငါ့ထင်ကြေးဒေတာဘေ့စကိစ္စတစ်ရပ်ဖြစ်သည်, ဒါပေမယ့်စမ်းသပ်ခြင်းလိုအပ်ပါတယ်, ဒီပြင်နေပြီလို့ပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်ကိုတိုက်ရိုက်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်
ဒီဇင်ဘာလ 2, 2011 တွင် 9:56 နံနက်
OK ကို Ofer, ကျနော်တိုက်ရိုက်သင်သည်ဆက်သွယ်မေးမြန်းပါပြီ. ၎င်းနောက်, ငါသည်လည်းမပြုရွှေ့ပြီ: /ငါ့ robots.txt ဖိုင်မှ index.php / *. ဒီတစ်ခါလည်းဒီအကြောင်းရင်းခဲ့သည်?
ဒီဇင်ဘာလ 2, 2011 တွင် 10:06 နံနက်
မလုပ်ပါနှင့်, အကြောင်းရင်းဒေတာဘေ့စသောကျောက်ပြားပျောက်ဆုံးနေသည်, ကိုယ်ကဖြေရှင်းဖို့ဘယ်လိုအတူပြဿနာနှင့် ပတ်သက်. ကိုတိုက်ရိုက်သင်တို့ဆီသို့ငါရေးထားပြီ.
ဒီဇင်ဘာလ 1, 2011 တွင် 12:38 နံနက်
Transposh ပြူထွက်လာသည် hi,
ဂရိတ် update ကို. ထိုအလံအောင်တစ်လမ်းမဆိုပိုကြီးရှိပါသလား? သူတို့ကတစ်ဦး bit ကိုအဖြူနောက်ခံပေါ်တွင်ပျောက်ဆုံးကြည့်ရှု.
ဒီဇင်ဘာလ 1, 2011 တွင် 12:28 ညနေ
သင်သည်အပိုက​​ြီးအလံများရှာပြီးနှင့်လက်ရှိသူများကိုအစားထိုးဖို့ရှိသည်လိမ့်မယ်, တစ်ခုသို့မဟုတ် subwidget ရေးဖို့ – မြင် http://trac.transposh.org/wiki/WidgetWritingGuide
ဒီဇင်ဘာလ 1, 2011 တွင် 6:01 နံနက်
အဆိုပါအသစ် plugin ကိုယနေ့ကတပ်ဆင်ပြီးနောက်ငါ့ site ကိုချိုးဖဲ့. ငါ plugin ကို enable လျှင်ငါ၏အတစ်ခုလုံးကို site ကိုယခုချသောကြောင့်ငါအဆင့်မြှင့်ဘူးဆန္ဒရှိ🙁
ဒီဇင်ဘာလ 1, 2011 တွင် 12:25 ညနေ
wordpress.org ကနေ Re-install လုပ်ပါ plugin ကိုကြိုးစားပါ, ထို widget က function ကိုသုံးစွဲသူတစ်ဦးကျိုးပဲ့ပျက်စီးမှုများအတွက်ပြင်ဆင်ချက်တပ်ဖြန့်ခဲ့, သင်ကိုလည်းတိုက်ရိုက်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပြီးကျနော်တို့ကူညီပါ့မယ်
ဒီဇင်ဘာလ 2, 2011 တွင် 10:53 နံနက်
Ver နှင့်အတူဖြစ်လို့ပြင်ဆင်ရန်စာသား. 0.8, ဘာမှားလို့လဲ?
ဤကွန်ရက်မှာ http://www.wcafeasia.com plugin ကို install လုပ်ထားပေမယ်မှာအားလုံးမည်သည့်စာသားတည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ?
ကောင်းမွန်သောအလုပ်ဖြစ်တယ်တစ်ခု erlier ဗားရှင်းနဲ့အခြားဆိုဒ်ရှိသည်, ငါသည်ဤတဦးနှင့်အတူ usel တူညီတဲ့ settings ကိုရှိသည် (0.8), ဒါပေမယ့်ဖြစ်လို့ပြင်ဆင်ရန်.
ကျနော် Google ထံမှ API key ကိုàထည့်သွင်းပါပြီ (browser အတွက်)
ဒီဇင်ဘာလ 2, 2011 တွင် 11:29 နံနက်
သင့်ရဲ့ဆောင်ပုဒ်တစ်ခု jQuery1.3.2 loading ဖြစ်ပါတယ် (ရှေးခေတ်ဖြစ်သည့်), က fix ဒါအရမ်းပျော်ရွှင်လိမ့်မည်
ဒီဇင်ဘာလ 2, 2011 တွင် 1:18 ညနေ
ဒီဇင်ဘာလ 2, 2011 တွင် 3:21 ညနေ
အများပါဝင်သည်ကိုဖယ်ရှားဖို့လက်ရှိအခင်းအကျင်းဖိုင်များတည်းဖြတ် (ဖြစ်နိုင် header ကိုအတွက်)
ဒီဇင်ဘာလ 3, 2011 တွင် 6:39 ညနေ
Re-install .80 ညွှန်ကြားချက်များကိုတစ်ဦးလျှင်ဗားရှင်း, နှင့်ထို site နေဆဲဖြစ်သည် 100% ငါ plugin ကို enable လျှင်ကျိုးပဲ့ပျက်စီး.
သတိ၏နှုတ်ကပါဌ်တော် – ဒီဗားရှင်းကိုထည့်သွင်းမ, ကသတ္တုတွင်း ပြု. တူကသင့်ရဲ့ site ကိုချိုးဖျက်စေခြင်းငှါ.
ငါ plugin ကို folder ကိုဖျက်ပစ်လိုက်တဲ့, တစ်ဦးလတ်ဆတ်သောမိတ္တူ unzipped 0.80 ဆဲကွန်ရက်စာမျက်နှာတခုလုံးဝမ်းထဲမှာနေတက်. အဘယ်အရာကိုမျှ display တွေ – ဒါကြောင့်တစ်ဦးဖြူ browser ကို screen ကိုဖြစ်လာလိမ့်မယ်.
ဒီဇင်ဘာလ 4, 2011 တွင် 8:19 နံနက်
ကျွန်တော်သဘောတူသည်, မည်သည့်အဆင့်မြှင့်တင် install လုပ်ဘယ်တော့မှမ, အရာအားလုံးချိုးဖျက်စေခြင်းငှါ,, ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့ပွိုင့်ရန်, မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများကြည့်ရှု, ဒီဖြစ်နိုင်သည်ချက်မှတ်ထားမှုန့်သတ်ချက်ကိစ္စဖြစ်ပါသည်, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကအဆင့်မြှင့်မှချိတ်ဆက်နေသင့်သည်အဘယ်ကြောင့်တစ်ဦးအကြောင်းပြချက်ကိုမမြင်ရကြောင်း.
ယခု, သင်သည်ဤပြဿနာပြေလည်ဖို့အတွက်ချင်တယ်ဆိုရင်, ကိုတိုက်ရိုက် ဆက်သွယ်. ကြိုးစား, ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အားဖြင့်ကူညီရန်ကြိုးစား. တခါတရံမှာကျွန်တော်တို့ဟာမကျင့်
ဒီဇင်ဘာလ 4, 2011 တွင် 6:25 နံနက်
1. သင် Sitemap မှဘာသာပြန်ထားသောစာမျက်နှာများကို add ပုံကိုရှင်းပြပေးပါနိုင်? (သင်ယခင်မှတ်ချက်များအတွက်အကြောင်းကိုပြောတဲ့အခါငါမရ).
2. ဒီက WP အထူး Cache နဲ့အဆင်ပြေဖြစ်ပါသည်?
ဒီဇင်ဘာလ 7, 2011 တွင် 1:11 နံနက်
1. အဖြေကိုမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများအတွက်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ dev site ပေါ်တွင်ဖြစ်ပါသည် (http://trac.transposh.org)
2. ဟုတ်ကဲ့, အတော်လေးဒါ
ဒီဇင်ဘာလ 4, 2011 တွင် 10:28 နံနက်
ပဌမ, အကြှနျုပျဟုမဆိုစေ, သင်ကအကြီးအ plugin ကိုရှိသည်. ငါသည် USA ၌ရှိပါ၏, မော်ရိုကိုမှာ directory ကို site ပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်. ထို site ပေါ်တွင်ကို default သင်သည်ဘာသာစကား French ဖြစ်ပါသည်. ဒီ site ပေါ်တွင်, စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို directory တစ်ခုစာရင်းတွင်ထည့်ထားနိုင်တယ် (စံပို့စ်အမျိုးအစား) ကွဲပြားခြားနားသောဘာသာစကားသုံးပြီး. ဥပမာအားဖြင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအင်္ဂလိပ်ဘာသာတွင်တစ်ဦးစာရင်းတွင်ထည့်သွင်းဖို့လျှင်, plugin ကိုတိုင်ဘာသာပြန်ဆိုလိမ့်မယ် (အိမ်ခန်းနှင့်သက်ဆိုင်သော) အားလုံးတက်ကြွစွာဘာသာစကားသို့, ကို default language မှလွဲ. (အဲဒါကိုပြင်သစ်ယုံကြည်နေပါတယ်ကြောင့်?). တစ်နည်းပြောရရင်တော့, အင်္ဂလိပ်ဗားရှင်းနဲ့ပြင်သစ်ဘာသာပြန်ချက်တကယ်တော့နှစ်ဦးစလုံးတူညီသောအင်္ဂလိပ်ဗားရှင်းများမှာ. အဆိုပါ site ကိုပိုင်ရှင်များရေးသားချက်များအပေါင်းတို့၏ default ဘာသာစကားတွင်ပြချင်; နှင့်တက်ကြွစွာဘာသာစကားတွေတစ်ခုစီအတွက်ရရှိနိုင်. အတွက် listing ကိုတစ်ခုလုံးကိုခြုံဖို့အဲဒီက shortcode ဖြစ်ပါသည်, ဒါကြောင့်က default ဘာသာစကားတွင်ပြသပါလိမ့်မယ်? (ဥပမာ [tp = translate"FR"]မင်္ဂလာပါ[/tp] ထိုသို့ Bonjour ပြသပါလိမ့်မယ်. သို့မဟုတ်, ဒီလိုဆောင်ရွက်မှတခြားလမ်းလည်းမရှိ?
ဒီဇင်ဘာလ 6, 2011 တွင် 3:02 နံနက်
ဒီဇင်ဘာလ 7, 2011 တွင် 1:10 နံနက်
သင်ဆဲပြဿနာများရှိပါက, ဒီ site ပေါ်တွင် contact form ကိုအသုံးပြုဖို့တွန့်ဆုတ်ကြဘူး, နှင့်ကျနော်တို့ကူညီကျွန်တော်တို့၏အကောင်းဆုံးလုပ်ပေးမယ်
ဒီဇင်ဘာလ 6, 2011 တွင် 5:23 နံနက်
ကောင်းစွာ, ငါပြန်တစုံတခုကိုမျှနား ထောင်. didnt. သို့သော်, ငါသည်ကိုယ်ကျင့်နိုင်မည်ချင်အရာကိုပြီးမြောက်စေရန်မည်သို့မည်ပုံထုတ်တွက်ဆခဲ့. ရိုးရှင်းစွာအ mylang တစ်တန်းနဲ့တစ်ဦး div tag ထဲမှာအကြောင်းအရာထဲမှာခြုံ.
လည်း, FWIW, ဒီ plugin ထုံးစံပို့စ်အမျိုးအစားများ translate မည်လောသို့မဟုတ်မအပေါ်မည်သည့်သတင်းအချက်အလက်များအတွက်မှတ်ချက်တွေကတဆင့်ရှာဖွေနေမည်သူမဆိုများအတွက်. plugin ကိုတစ်ဦးဆောင်ပုဒ်၏ထုံးစံပို့စ်အမျိုးအစားများအသိအမှတ်မပြုပါဘူးတောင်မှ, သင်ထုံးစံပို့စ်အမျိုးအစားများနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန် plugin ကိုပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်, အတော်အတန်လျှင်မြန်စွာ. သင်သည်ဖိုင်နှစ်ခုတည်းဖြတ်ဖို့လိုတယ်. သင့်အနေဖြင့် on_ajax_tp_translate_all တည်းဖြတ်ဖို့လိုတယ်() transposh_admin.php နှင့် on_admin_menu အတွက် function ကို() လုပ်ဆောင်ချက်, transposh_postpublish.php အတွက်.
ဒီဇင်ဘာလ 6, 2011 တွင် 4:12 ညနေ
ကျနော်ပထမဦးဆုံးဒီအသုံးပြု，ခံစားချက်တို့သည်ကြီးစွာသော plug-in ကိုဖြစ်ပါတယ်。
အမှား 330 (ပိုက်::ERR_CONTENT_DECODING_FAILED)
ငါကိုဘယ်လို fix သလဲ?
ဒီဇင်ဘာလ 7, 2011 တွင် 1:08 နံနက်
အကြှနျုပျ၏ခန့်မှန်းချက်မှတ်ထားမှုနှင့်အတူပြဿနာများဖြစ်လိမ့်မည်, သို့မဟုတ်ကို double gzipping ပြဿနာ
Stacy & ဂျိမ်း ကပြောပါတယ်
ဒီဇင်ဘာလ 6, 2011 တွင် 5:55 ညနေ
အပြင်ဖြောင့်ဘာသာပြန်ချက်ကနေထက် ပို. လျှင် Multi-ဘာသာစကားများ domains များလက်ခံရန်မ 1 default ဘာသာစကား Domain တစ်ခုအတွက်အသုံးပြုသည်.
ဒီဇင်ဘာလ 7, 2011 တွင် 9:49 နံနက်
ကို enable လုပ်ထားသောအခါငါကိုမေးချင်ပါတယ်，ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်：
“ကျနော်တို့ကထောက်ခံမှာ in-့ Cache memory အင်ဂျင်ကိုတွေ့ရှိရန်မစွမ်းနိုင်ခဲ့ကြသည်, တဦးတည်းစွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်နိုင် install လုပ်ပါ. Transposh အကူအညီ Check”
အခြား，ကျနော်လက်ရှိသတ်မှတ်ထားတဲ့ URL ကို setting ကိုတစ်ဦးကိန်းဂဏန်းပုံသေနည်းဖြစ်သည်ကိုသုံး，နမူနာ：ကို http://www.wukungfu.com/archives/123
ထိုကဲ့သို့သော URL ကို set ကိုထိခိုက်လိမ့်မည်လော
လျင်မြန်စွာသုံးစွဲဖို့မျှော်လင့် ~ သင့်ရဲ့အကူအညီအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်
ဒီဇင်ဘာလ 7, 2011 တွင် 12:02 ညနေ
1. သင်လုံခြုံစိတ်ချစွာဒီသတိပေးချက်ကိုလျစ်လျူရှုနိုင်, ကသာစွမ်းဆောင်ရည်မှတ်ယူသည်, plugin ကိုဒီမပါဘဲအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်
2. အဆိုပါ permalink structure ကိုထိန်းသိမ်းထားရမည်.
ဒီဇင်ဘာလ 7, 2011 တွင် 1:09 ညနေ
ထိုအခါအကြှနျုပျသ GZIP ဖြေရှင်းနိုင်ပိတ်လိုက် ^^。
လောလောဆယ်အောင်မြင်စွာ plug ကိုဖွင့်လှစ်，
သို့သော်လည်းငါသည် sidebar မှာရှိတဲ့သင်သည်ဘာသာပြန်ချက် tools တွေတူမမြင်နိုင်ပါဘူး，
ငါ့ sidebar မှာထဲသို့အဆို့စေနည်း
ဒီဇင်ဘာလ 7, 2011 တွင် 1:28 ညနေ
sidebar မှာရှိတဲ့ plugin ကိုထားရန်, သင့်ရဲ့အသွင်အပြင်ကို menu ကိုသွားနှင့် sidebar ထဲကမှ transposh widget က drag, သင်လုပ်ချင်တဲ့ widget ကစတိုင်နဲ့ခေါင်းစဉ်ရွေးချယ်ကန်
ဒီဇင်ဘာလ 7, 2011 တွင် 1:26 ညနေ
ငါဖြည့်စွက်ရန်ပါသေးတယ် set ကိုမွငျလြှငျ：
MSN ကို API သော့
Google က API သော့
ငါသည်အ GOOGLE API ကိုအတူသွားရသောအခြမ်းကို MSN API ကိုလျှောက်ထားနိုင်ပါသလား?
ဒီဇင်ဘာလ 7, 2011 တွင် 1:30 ညနေ
သင်ဆန္ဒရှိရင်သူတို့ကိုထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်, သူတို့ရဲ့သင့်လျော်သောဆိုဒ်များပေါ်တွင်ညွှန်ကြားချက်များအတိုင်းလိုက်နာ, ယခုမူကားအဘို့ဤရန်မလိုအပ်ပါသည်
ဒီဇင်ဘာလ 7, 2011 တွင် 2:02 ညနေ
ဒီဇင်ဘာလ 7, 2011 တွင် 2:24 ညနေ
သင့်ရဲ့ဆောင်ပုဒ်ဟာအလွန်ဟောင်းနွမ်း jQuery ကို loading သောကြောင့်င် (1.3.2), ဒါကြောင့်တည်းဖြတ်အလုပ်လုပ်မည်ကိုမြင်ရ
ဒီဇင်ဘာလ 7, 2011 တွင် 2:27 ညနေ
ကိုယ့်တစ်ဦးဆွဲ sidebar ကို plug，
သို့သော် Shique သုံးပြီးအခြားကွန်ပျူတာများအတွက်မမြင်ရ。
် Giorgio ကပြောပါတယ်
ဒီဇင်ဘာလ 7, 2011 တွင် 3:38 ညနေ
မင်္ဂလာ ….ဒါဟာအလုပ်လုပ်ဖို့စီမံ …
အံ့သြစရာကောင်းတဲ့ plug-in ကို ….
ဒီဇင်ဘာလ 8, 2011 တွင် 2:11 ညနေ
ယခုရဲ့ plug-ins ကို Enable လုပ်ထားပါ，သို့သော်စာမျက်နှာ、အပိုဒ်တစ်ဦးပြီးပြည့်စုံဘာသာပြန်ချက်မဟုတ်ပါ，
ဒီဇင်ဘာလ 11, 2011 တွင် 1:24 နံနက်
ကွက်လပ်မတိုင်ခင်နဲ့အပြီး bolded စာသားဘာသာပြန်ချက်များကိုပျောက်ကွယ်သွား.
ဒီဇင်ဘာလ 11, 2011 တွင် 1:28 နံနက်
ကောင်းစွာ, ကိုယ့်ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်ထင် ခိုင်၎င်း tag ဖြင့် အစားရဲရင့်
ဒီဇင်ဘာလ 12, 2011 တွင် 1:33 နံနက်
တကယ်တော့ဒါဟာကောင်းလုပ်သင့်တယ်ထင်, ထိုသို့မဖြစ်သင့်ဘူးစရာအကြောင်းမရှိ, သည်မခံမသည်အဘယ်ကတစ်ဦး url များကိုကျေးဇူးပြုပြီး
ဒီဇင်ဘာလ 12, 2011 တွင် 8:22 ညနေ
နှင့်ပထမဦးဆုံးအားလုံးဘာသာပြန်ထားသောစာမျက်နှာများတွင် “အားကြီးသော” ဝါကျအမှားနှင့်အတူရှိ၏, ဒါပေမယ့်အတွက်
ဒီဇင်ဘာလ 13, 2011 တွင် 10:26 နံနက်
ငါသည်သင်တို့၏ကြီးမြတ်သော plugin ကိုဆက်လက်သုံးစွဲချင်ပါတယ်, ဒါပေမဲ့ဒီ Overload အပေါ်ဆာဗာကိုပို့ပေး.
ငါသည်အ memcache install လုပ်ပြီး W3 စုစုပေါင်း Cache (ကို enable လုပ်ထားသာဒေတာဘေ့စ cache ကို), ဒါပေမဲ့ရလဒ်စိတ်ပျက်ဖွယ်ဖြစ်ကြောင်း.
ရှိခြင်းဘလော့ဂ်ပေါ်လျှင်တက်ကြွစွာ Transposh 7.000 ပို့စ်များ, တစ်ဦးတည်းဤ CPU ကို crash ဖို့လုံလောက်ပါတယ်.
ဒီဇင်ဘာလ 29, 2011 တွင် 11:59 နံနက်
သင့်ရဲ့ server ကို Specification ကိုငါ့ဘတ်ဂျက် server ကိုလက်ကိုင်ဘာတွေလုပ်နေလဲ3transposh နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီကို install လုပ်ပြီး 20K ရေးသားချက်များနှင့်အတူကြီးမားတဲ့ websites များကို. ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင် Nginx တူပြောင်းပြန် proxy ကိုကြိုးစား?